Budata MediaMonkey maka Windows
Free Budata maka Windows (15.54 MB)
MediaMonkey bụ onye njikwa egwu dị elu na onye ọkpụkpọ maka ndị ọrụ iPod na ndị na-anakọta egwu dị egwu. Site na ngwanrọ a, nke nwere ike ịdekọ CD na faịlụ ọdịyo na OGG, WMA, MPC, FLAC, APE, WAV, MP3, ị nwere ike nweta foto album na ozi egwu nụzọ dị mfe site na ọdụ data na ịntanetị efu. Usoro ihe omume, nke na-enye gị ihe ịga nke ọma mgbakwunye nchịkọta akụkọ na-enye gị ohere iji ihe elu mkpado usoro, na-enyere gị aka idobe gị music nọbá akwụkwọ ọzọ hazie ya akpaka faịlụ na nchekwa renaming atụmatụ.
MediaMonkey, ebe ị nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ maka ịchekwa na ịkwado egwu gị na CD ripper ya, CD / DVD ọkụ, ihe ntụgharị faịlụ ọdịyo, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta egwu kachasị amasị gị na ndị editọ listi ọkpụkpọ ya nke na-eji aka ma ọ bụ na-edepụta listi ọkpụkpọ na-akpaghị aka. .
A na-edobe ọkwa ụda mgbe niile notu ọkwa ahụ na njirimara njikwa olu pụrụ iche nke onye ọkpụkpọ nke mmemme ahụ, ebe ị nwekwara ike ịmepụta ngwakọta egwu. Ọbụlagodi na ọkwa nke egwu dị iche, mmemme ahụ na-edozi ọkwa maka gị. Kama ọkpụkpọ a, nke na-akwadokwa njirimara, plug-ins na nhọrọ anya nke mmemme Winamp, MediaMonkey na-enye gị ohere ịtọ Winamp dị ka onye na-egwu egwu.
Dakọtara na obere ọdịyo ngwaọrụ, software na-enye gị ohere ịmekọrịta ọba akwụkwọ mgbasa ozi na kọmputa gị na iPhone, iPod, Walkman ekwentị ma ọ bụ ndị ọzọ obere ngwaọrụ. Site na mmemme a, nke nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa, ị ga-enwekwa njirimara serach ederede zuru oke. Site na njikwa egwu egwu a dị elu, nke na-enye gị ohere ijikwa ihe karịrị egwu 50000 notu interface na-enweghị nkwụsịtụ ọ bụla, ị ga-enwe ike iburu egwu gị wee soro gị chekwaa oge niile.
Atụmatụ agbakwunyere na ụdị MediaMonkey 4:
Mmekọrịta akpaaka na ngwaọrụ mkpanaaka dị ka iPhone, iPad, iPod, Blackberry, Android.
Ị nwere ike ịkpọ vidiyo ma ọ bụ egwu na xBox, PS3 ma ọ bụ DLNA TV dakọtara.
Ọ nwere ike ijikwa ọdịnaya gị site na ịnweta ngwaọrụ ekekọrịtara site na sava UPnP. Enwere ike ibudata ọdịnaya site na webụsaịtị yana onye njikwa nbudata.
Atụmatụ ịkpọghachi vidiyo agbakwunyere. Ị nwere ike igwu, mmekọrịta ma ọ bụ dezie niile na-ewu ewu video formats dị ka AVI, MP4, WMV, dị nnọọ ka ọdịyo faịlụ.
Usoro a gụnyere nime ndepụta mmemme Windows efu kacha mma.
Nha faịlụ: 15.54 MB
Mmepụta: Ventis Media